Indlela yokusebenzisa ikhodi "Skyrim" ekhonweni izibuko
Indlela yokusebenzisa ikhodi "Skyrim" phezu izibuko amakhono
Akunjalo kudala, kule mdlalo "Skyrim" emathubeni amasha, ngayo nefunda ngayo umdlali ngamunye kungaba ukumpompa hero yakho. Futhi ukubizwa ngokuthi isici amakhono edume. Ngenxa emisha, uyoba nethuba ukuhlela kabusha ngokuphelele ezingeni isivele bahlakulela ikhono. Ngemva kwalokho ungase uqale abaqhuba futhi inqubo uzotshala. Okwamanje, kukhona ikhodi "Skyrim" ku amakhono amaphuzu, kodwa uma ukhetha ukusisebenzisa ke yonke impumelelo yakho uzobe zeroed, kodwa ngeke ube yize. Ozitholayo esikhathini esizayo uzokwazi ukuba zisetshenziselwe ukuthola amakhono kanye nokuzithuthukisa lezo zinhlelo e uhlamvu lwakho. Uma baye bakwazi ukubhekana nalezi ezintsha ke wazi ukuthi ngokwandisa ezingeni lungene 100% likhono kungahlolwa yaphenduka inketho edume. Ngakho, iyoba waphinda ibuyiselwe ezingeni kokuqala 15. Ngizothanda futhi ukubalula elinye iphuzu elibalulekile. Noma yiliphi ikhono ungenza ziyaphawuleka, nesenzo efana uyenzele ngokuphindaphindiwe kuvumelekile.
Hhayi Abasebenzisi abaningi kuyaqondakala "Skyrim" umdlalo, kanjani ukuze uthole amaphuzu ikhono. Kodwa injongo eyinhloko amakhono edume wukuthi ungakwazi ukumpompa ngendlela evamile, futhi nalo, ongayifinyelela ukwanda ezingeni uhlamvu.
Yiqiniso, umdlali ngamunye wacabanga mayelana ngayiphi indlela ungakwazi masinyane ukumpompa amakhono futhi ngaleyo ndlela uthole ozitholayo ngaphezulu, futhi lokhu kwenziwa ngosizo umkhonyovu. Okwamanje, ikhodi phezu "Skyrim" ekhonweni izibuko kukhona eyodwa kuphela, ukuthi kancane eyaziwa abasebenzisi, kodwa sekuyisikhathi eside ochwepheshe awusebenzisa akhawunti abo, futhi bayakwazi lokho kuyaphumelela. Yiqiniso, uma unezinye nesifiso sokwenza ukudonsa zabo, ngaphandle kwesofthiwe eyengeziwe futhi aphambe, bese usebenzisa le ndlela, uyobe umane akanandaba. Kodwa uma entshisekweni Eqinisweni, ukuchitha isikhathi esiningi akwanele ke kungcono kuwufanele ukuzama ukusizakala izincomo zethu.
Okwamanje, ikhodi phezu "Skyrim" ekhonweni izibuko zingasetshenziswa yinoma umdlali ngamunye. Nokho, ukuze athole wavalwa, nakanjani kudingeka wazi kanjani iqondiswa futhi isebenze. Ukuze ikhodi "Skyrim" ekhonweni izibuko yenziwe yasebenza, kudingeka chofoza inkinobho play (~). Kulesi pre-ezidingekayo ukuqinisekisa ukuthi ikhibhodi yenziwe Latin, ngamanye amazwi, amaNgisi isendlalelo sekhibhodi kufanele isethwe. Sebenzisa inhlanganisela advskill twohanded 999999.
"Maynkraft: Ukusinda nabangani" - kuyini?
"I Ububi Obungaphakathi": Izidingo uhlelo, idethi kanye nokunye.
Phezulu emphemeni of "ngamasondo Druid": incazelo isu umdlalo
Incwadi ka-Isiqinisekiso njengengxenye idokhumenti kwegazi inhlangano
Ukushisa wesifunda (ukuzungeza zemvelo) lendlu yangasese ngezandla zakhe